नेताहरुका सामु प्रश्नै प्रश्न
पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, देश र जनताको प्रधानमन्त्री किन बन्न सकेनन् ? नेता त गुण्डाका पनि हुन्छ, देशको राजनेता बन्ने रहर खोई ?
जुन निकायमा श्रमको सम्मान हुदैन, त्यो निकाय नै पतन र विनासको खाडलमा विलिन हुन्छ । संसद र सरकार त्यस्तो निकाय बनेको छ, जहाँ श्रमको होइन, स्वार्थको बोलवाला छ । त्यसैले लोकतन्त्र पतनोन्मुख हुँदैछ ।
गलत पासवर्डले सानो मोबाइल फोन त खुल्दैन भने गलत नियत र गलत कार्यले स्वर्गको ढोका खुल्छ, नयाँ नेपाल बन्छ भन्नु मुर्खता होइन र ?
राजधानीमा सडक पार गर्नका लागि ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ हुनुपर्छ । न जैब्रा क्रसिङ मेटिएका छन्, न बत्ती बल्छ, न त गाडी नै रोकिन्छन् । सरकारको निरंकूशता बढ्दो छ र पैदल यात्रु अर्थात आम नागरिकको जीवनको सुरक्षा केही छैन, जता हे¥यो उतै मृत्यु मृत्यु ।
देशमा जहिले र जतिबेला पनि मन्त्री फेर्ने हल्ला आईरहोस् त्यसपछी भ्रष्टाचारले सिमा नाघ्नेछ । कालाबजारियाले बजारमा प्लाष्टिक चामल, प्लाष्टिक दुध र प्लाष्टिक अन्डाको बिगबिगी पारेका छन् । सक्कली सरकारले नक्कली काम गरेर कर बढाउने हो, बिकृति बढ्ने हो, बढिरहेको छ ।
यो देशमा न कोही चोर छ, न जुवाडे, जड्याहा, न त भ्रष्ट आदि छन् । जे छन् नेता छन्, प्रशासन छ र सिण्डिकेट छ । यस्तो राम्रो देशमा केबल कानून नै फितलो हुँदा विदेशी सशर्त अनुदानले पुरै देशलाई घुमाइदिएको छ ।
नारायण वाग्लेको उपन्यास ‘पल्पसा क्याफे’ को एक ठाउँमा लेखिएको छ– मेरो कोही छैन यहाँ । तर सबै थोक यहीँ छ । आजकाल संविधान, ७ सय ६१ सरकार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यस्तै यस्तै लाग्छ । आफु भित्रको आत्माविश्वाशमा अडिग बनेर जिउन सक्ने मान्छेले समाजलाई नै परिवर्तन गरी दिन सक्छ । यति शक्तिशाली सरकार छ, सरकारमा बस्नेहरुले आफूलाई मात्र परिवर्तन गरिरहेका छन् । देश र जनता रछ्यान पो बनाइदिए ।
देशको बिकास युवाले होईन बुढाले गर्छन् भन्ने लागेर होला हिजोआज, युवाहरुको बुढाप्पा तस्बिर त फेसबूकको वालमा भकाभक देख्न पाइएको छ, अब चाहीं यो देशमां केही हुन्छ कि कसो ? यस्तो आत्मरती भाव आइरहेछ ।
तितो सत्य– फूलको मालाले घाँटी नै असन्तुलित भएका राजनीतिज्ञ महोदयहरु भन्छन्– यो सम्मान त्यत्तिकै पाएको होइन ? अनि दर्शकदिर्घाबाट एउटा आवाज आयो, यस्तै सम्मानको मोहले त देशलाई स्विजरल्यान्ड होइन स्वाजिल्यान्ड बनाउदै हुनुहुन्छ । नेताहरुको प्रतिक्रिया के छ यो युवा आवाजमा ?